फराकिलो सोंच र रचनात्मक प्रयासले दिने सफलता - Safal Stories
Home Short Stories फराकिलो सोंच र रचनात्मक प्रयासले दिने सफलता
फराकिलो सोंच र रचनात्मक प्रयासले दिने सफलता
हेनरी फोर्डले, आधुनिक विश्वलाई भी-८ इन्जिन दिए । फोर्ड कुनै वैज्ञानिक भने थिएनन् । त्यसो त उनले, औपचारिक रुपमा स्कुलको शिक्षा पनि पूरा गरेका थिएनन्। चौध वर्षको उमेरपछि फोर्ड स्कुल नै गएनन् । आविष्कार सोंचको एउटा परिणाम हो । नपढेका भए पनि फोर्डले, एउटा गहन सोंच निकाले । भी-८ इन्जिन, आफ्नो कम्पनिको लागि सांचै मूल्यवान हुनसक्छ भन्ने उनले ठम्माए। तर बनाउने चाहिं कसरि ?
फोर्डले, आफ्नै कम्पनीका उच्च शिक्षितहरुलाई इन्जिनको प्रकार बताएर, बनाउन लगाए । कामदारहरुले ढुक्कका साथ बसे, यस्तो इन्जिन बनाउन सम्भव नै छैन। केही दिनपछि फोर्डले इन्जिन कति बन्यो भनेर सोधे। कामदारहरुले उत्तर दिए, ” के बनाउन सकिन्छ र केचाहिं सकिंदैन, त्यो हामीले झन् बुझेका छौं। असम्भव चिज कसरि बनाउने ?”
केही महिना चुचाप बसेका हेनरी फोर्डले फेरी एकदिन त्यो कुरा निकाले । कामदारहरुले उनको कुरामा बेवास्ता गरे । फोर्डले कडा स्वरमा भने,” इन्जिन कति बन्यो ? कुनै पनि हालतमा मलाई त्यो इन्जिन चाहिन्छ र चांडो चाहिन्छ ।” बनाउन असम्भव छ भनेका ती कामदारहरुले केही दिनमै भी-८ इन्जिन बनाएर बुझाए ।
असम्भव छ भनिएको त्यो इन्जिन बन्न सम्भव कसरि बन्यो ? किनकी ती कामदारहरुले आफ्नो सोंचलाई फराकिलो बनाए र आफ्नो रचनात्मक क्षमताले शिक्षाले दिएको सिमितता भन्दा पर पुगे ।
Previous२०१७ को लागि बिबिसीले निकालेको विश्वका १०० महिलाको सूचीमा नेपालकी इन्दिरा राना मगर